Ọnọdụ Ịzụ ahịa Ugbu a | FXCC
Home / trading / Ngwaọrụ Forex / Ọnọdụ ọnọdụ ahia ugbu a
Ọnọdụ gị na ahia ahia ugbu a
Ọnọdụ Ịzụ ahịa Ugbu a (CTP) na-enye ozi na ibe iri na isii na ebe ntanetị ọlaedo. A na-ejikọta akara ngosi azụmahịa na ịzụta / ree mmasị iji chọpụta ụyọkọ mkpụrụ ego. A na-emelite ozi a ọtụtụ ugboro n'oge niile na-azụ ahịa na ọkwa kachasị ọhụrụ. A na-ekwenye na ọnọdụ ọ bụla na 15 nkeji ma wepụ ya site na usoro ahụ mgbe ọ na-arụ ọrụ site na mmegharị ahịa.
CTP dị ka Ngwá Ọrụ Nhọrọ
Site na wijetị a, ndị ahịa anyị nwere ike iji ohere nke ozi dị irè; ndị ahịa nwere ohere ịchọta akara ngosi nke na-ekpughe ọkwa ọnụahịa, dị ka, nkezi, na-azụta ego. Data ahụ ziri ezi; a chịkọtara ma wepụta ya na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụghị akwụkwọ na akwụkwọ ndị ahịa na-atụ aro.
CTP dịka akụkụ nke Nchikota
Ngwaọrụ a nwere ike ịghọ ngwá ọrụ bara uru mgbe ejikọtara ya na nkwado na nchịkọta nchịkọta. A na-ewepụta ọkwa na ịzụta ma ọ bụ ree mmasị site na ndị ndụmọdụ na-eduzi ahịa na ndị na-ege ntị na ọkwa ndị a, na-eme Ọnụ ọgụgụ ego na-esikarị nwee ntụkwasị obi.
Ngwaọrụ a bụ enwere ike ịnweta site n'aka ahịa anyị maka ndị na-ahụ maka akaụntụ FXCC.
Ọnọdụ Ịzụ ahịa Ugbu a